Te hitazona lanja ? Safidio ny ora hisakafoanana !
Fo, tsinay, aty…koloin’ny labiera avokoa!
Nanaovan’ny mpikaroka siantifika fanadihadiana ny labiera izahana raha misy tombontsoa azo avy aminy na tsia.
Tsy mihinana menaka mihitsy, … fandrika mety hampatavy
Marobe izao ny toro-hevitra hanatsarana ny fomba fisakafo ho ara-pahasalama sy mba tsy hampatavy. Noho ny faniriana mafy hanatsara ny fomba fisakafo anefa dia mety misy ny fomba izay vao maika manome vokatra mifanohitra amin’izay tadiavina. Ireto misy hadisoana telo lehibe mety be mpanao.
Antony 5 tsy tokony hihinanana hena be loatra
Maro ny antony tsy mahatsara ny mihinan-kena be. Ireto 5 manaraka ireto no tena antony lehibe tsy azo tsinontsinoavina : Mankarary
Misakafo tsara kanefa tsy mihamatavy…izao atao
Tsy voatery hanao régime foana vao hihena. Azo atao koa ny manamboatra ny fomba fisakafoanana mba tsy ahiana hampatavy izy ireny kanefa tsy mifadifady be. Ireto toro-hevitra 5 ireto fotsiny arahina
Sakafo 8 manemotra ny fipoiran’ny kentrona
Misy fiantraikany amin’ny hoditra ny dona avy amin’ny tontolo manodidina, ny fahazarana sasany atao isan’andro ary ny tarazo.
Manafisaka kibo haingana ny poara
Tsy ny fampihenan-tena foana no vahaolana raha te-hanena kibo. Indraindray mantsy dia vokatry ny tsy fahaizana misakafo no mahatonga ny kibo hibontsina.
Hadisoana ara-tsakafo 8 maha ngeza
Avy amin’ny sakafo no antony betsaka indrindra mahatonga ny olona iray hatavy na tsia. Misy tokoa mantsy ny fahazarana ara-tsakafo fataontsika kanefa tena mampatavy tokoa. Ireto avy izy ireo.
Toy ny maha-zava-dehibe ny sakafo hanina dia zava-dehibe ihany koa ny ora hisakafoanana. Antoky ny fahasalamana izany no sady mahatonga ny lanja ho voatazona ara-dalàna. Arakarak’io ora hisakafoanana io, noho izany, no mety hampihena na hampitombo ny habe.
Ireo ora hihinanana raha te hampihena tena
Raha ny fikarohana nataon’ny orinasa momba ny fampihenam-batana « Forza Supplements », dia misy ora 3 tokony arahina tsara, raha te hampihena vatana. Ny sakafo maraina, ohatra, dia tokony hanina amin’ny 7 ora maraina hatramin’ny 7 ora sy 11 minitra maraina. Eo anelanelan’ny amin’ny 12 ora sasany sy amin’ny 1 ora folakandro kosa, na amin’ny 12 ora sy 38 minitra tsy diso, ny sakafo atoandro. Ary ny sakafo hariva indray dia eo anelanelan’ny amin’ny 6 ora sy amin’ny 6 ora sasany hariva ihany.
Adin’ny 3 alohan’ny hatoriana
Isan’ireo nodinihin’ireo manam-pahaizana ao anatin’io orinasa io ny antony mampitombo ny kalôrian’ny vatana. Raha toa ka kely loatra ny sakafo hanina amin’ny maraina dia voasarika hitsaingotsaingoka mandritra ny tontolo andro. Raha mihoatra ny amin’ny 6 ora sasany hariva hatramin’ny 10 ora alina kosa ny sakafo hariva, dia ho kely ny kalôria arian’ny vatana, ka lasa mora mihangeza. Farany, tokony sakafo maivana no hanina amin’ny hariva ary tsy maintsy hanina adin’ny 3 mialohan’ny hatoriana izany.
Ora fisakafoanana idealy, ho an’ireo te hitazona lanja
· Maraina : Eo anelanelan’ny amin’ny 7 hatramin’ny 8 ora maraina no idealy. Tsy mihoatra ny amin’ny 10 ora kosa anefa ary 30 minitra aorian’ny fifohazana, fara-fahaloany.
· Sakafo Atoandro : Eo anelanelan’ny amin’ny 12 ora sasany hatramin’ny 2 ora folakandro no idealy. Tsy tokony atao mihoatra ny amin’ny 4 ora hariva. Mielanelana adin’ny efatra aorian’ny sakafo maraina.
· Sakafo hariva : Eo anelanelan’ny amin’ny 6 ora hariva hatramin’ny 9 ora alina no idealy. Tsy atao taran’ny amin’ny 10 ora, na mihoatra ihany koa. Hanina adin’ny 3 mialohan’ny hatoriana.